Cnaps: mpiasa 66 nomena mari-boninahitra | NewsMada
Cnaps: mpiasa 66 nomena mari-boninahitra
Nankasitrahana ny mpiasa nahavita be tao amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). Miisa 66 izy ireo notolorana mari-boninahitra, commandeur de l’ordre national (1), officier de l’ordre national (42) ary chevalier de l’ordre national (23). Nanolotra izany ny mpitantana ny CNaPS, notronin’ny minisitry ny asa, ny fampananan’asa, ny asam- panjakana ary ny lalàna sosialy (MTEFPLS), Ranampy Gisèle. Nambarany fa nahavita be teto amin’ny firenena amin’ny fiarovana saosialy ireto mpiasa ireto matoa nahazo mari-boninahitra ary misy fiantraikany amin’ny CNaPS.
Nilaza Rakotomanana, mpanolotsaina manokana ao amin’ny toniam-pitantanan’ny Tahirim-pirenena, nahazo ny Commandeur de l’ordre national, fa tanjona ny mikarakara ny sosialin’ny vahoaka sy ny mpiasa rehetra mamokatra eto Madagasikara, ka tokony hilofosan’ny mpiasa rehetra ato amin’ny CNaPS.
Ho an’ny tale jeneraly, Rakotondraibe Mamy, zava-dehibe ny fiainan’ny mpiasa. Miteraka fahazotoana sy vokatra amin’ny asa ny finoana sy ny fitiavan-tanindrazana. Nampirisihiny ny tsirairay hiroso hatrany, hiray hina ary hiasa am-pitiavana, satria tanjon’ny fanjakana ny hanomezana fiahiana sosialy ny vahoaka rehetra.